Xisaabiyaha | Saadaasha Shabakadda
Illaa iyo hadda waxaan wax ka qabannay daruuraha cabirkoodu inta badan ku fiday kordhin fidsan laakiin markan waxaan ka hadlaynaa daruuraha taagan waxaanan ku bilaabaynaa mid ka mid ah labada nooc ee loo kala saari karo sidan, waxaan ka hadlaynaa Cumulus.
Cumulus waa daruuro go'doon ah, guud ahaan cufan oo leh qaabab si fiican loo qeexay, oo si toos ah ugu soo baxa qaab kuuskuus, domes, ama munaarado, iyo dusha sare ee qulqulaya badanaa waxay u egyihiin ubax. Qaybaha qorraxda ee daruurahan waa kuwo cadcad oo dhalaalaya; salkeedu waa mugdi iyo jiif. Mararka qaarkood waxay u muuqdaan kuwo dabayshu jeexday.
Waxay ku samaysmaan badanaa dhibco biyo ah ama kiristaalo baraf ah oo ka mid ah qaybaha daruurta taas oo, jooggoodu sarreeyo, heerkulka ka hooseeya 0º C. Waxay ku jiri karaan dhibco biyo qabow. Waxay horumariyaan markay dhacaan qulqulka hawada oo ay sababtay kululaynta aan sinnayn ee hawada dusha sare ee dhulka. Markay kor u kacdo, hawadan waxay isku uruursaa daruur waxayna kori doontaa iyadoo kuxiran heerka degenaansho la'aanta hawada ee xilligaas jirtay.
Cumulus-cimilo-Cumulus waxay koraan xagaaga duhurkii ilaa qorrax dhaca, markay kala baxaan. Haddii ay jirto heer deggenaasho la'aana way u sii gudbi karaan Cumulus congestus kiiskeeduna noqdo Cumulonimbus, oo wata roobab iyo duufaanno. Waa inaan lagu jahwareerin Stratocumulus, mana la socdo Cumulonimbus.
Waxay si fiican ugu kala duwan yihiin buluugga cirka cufnaanta weyn ee ka dhigaysa inay u muuqdaan kuwo cad oo dhalaalaya. Sababtaas oo kale saldhigyadu waxay u muuqan doonaan madow ama madow. Waa inaad isticmaashaa Kala shaandhaynta kala duwanaanta ugu badan ee daruurta iyo cirka iyo sidoo kale hagaajinta diiradda kuuskuus.
Way ku kala duwan yihiin afar nooc (Cumulus humilis, Cumulus mediocris, Cumulus congestus iyo Cumulus fractus) iyo noocyo kala duwan (Cumulus radiatus).
Macluumaad dheeraad ah - Stratus, Qaamuuska 'Stratocumulus'
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sawirro » Cumulus